Ukusuka e-Italia Trasporto Aereo Inqwelomoya kwiAlitalia Imivuzo yokunyaniseka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » Ukusuka e-Italia Trasporto Aereo Inqwelomoya kwiAlitalia Imivuzo yokunyaniseka
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Kwenzeka ntoni kuAlitalia umvuzo wokunyaniseka?
Ekuqaleni kwe-Italia Trasporto Aereo (i-ITA) entsha-eyayisaziwa njenge-Alitalia- imisebenzi, i-ITA iza kuqhuba iinqwelomoya zeenqwelo moya ezingama-52, ezisi-7 kuzo zingumzimba obanzi nomzimba omxinwa angama-45. Kodwa kuyakwenzeka ntoni kwiAlitalia imivuzo yokunyaniseka kutshintsho?
Umphathi omkhulu wenqwelomoya entsha, uFabio Lazzerini, uqinisekisile kwinkomfa yoonondaba ukuba inqwelomoya iza kukhula iye kwiinqwelomoya ezingama-78 ngo-2022.
Olu konyuka luza kuzisa ezinye iinqwelomoya ezingama-26 apho isi-6 siyakuba ngumzimba obanzi kwaye nomzimba omxinwa angama-20.
Kuza kwenzeka ntoni kwimivuzo yokunyaniseka kweAlitalia xa inqwelo moya entsha yesizwe isusa?
U-Lazzerini uthe: “Ukusukela ngo-2022, silindele ukuqala ukwazisa ngenqwelomoya entsha kwisikhululo senqwelomoya, esiya kuthi ngokuthe chu sithathe indawo yenqwelomoya endala. Ekupheleni kuka-2025, izithuthi ziya kukhula ziye kwi-105 (23 ububanzi bomzimba kunye nama-82 omzimba omxinwa), kunye neenqwelo moya ezizukulwana ezitsha ezingama-81 (ezilingana neepesenti ezingama-77 zenqanawa zizonke) eziya kuthi zivumele - kwiinjongo zeNewco- ukuba zibaluleke kakhulu ukunciphisa imeko yempembelelo kunye nokwenza ngcono ukusebenza kunye nomgangatho wentengiso. ”
I-ITA ithi ndlela ntle kwiAlitalia MilleMiglia-Kwenzeka ntoni kumanqaku akwikhadi leAlitalia?
Ukutshintsha kwekhadi lokunyaniseka ukusuka IAlitalia ukuya kwi-ITA icwangciselwe phakathi ku-Okthobha xa i-Alitalia iyeka ukubhabha kwaye i-ITA entsha (i-Itali yoThutho loMoya e-Itali) iqala, eya kushiya kuphela iinqwelomoya ezingama-52. Ngokutsho kwe-CEO entsha, oku kwanele "ukukhuphisana." Uthe nangona kuyinyani ukuba ezinye iinkampani zineenqwelo ezinkulu, "zingaphi iinqwelo-moya ezibhabhayo ngoku?" Utsho uLazzerini, xa enikwe ingxaki ye-COVID, bambalwa.
U-Lazzerini ucacisile: “Ukuthintela ukuchitha yonke imali yase-Itali, sikhethe indlela ethe chu enxulumene nomthamo wezithuthi ezilindelweyo kwiinyanga ezizayo. Ukuba okwahlukileyo kungakhokeleli ekuvalweni okutsha, inkampani iyakwandisa inani lenqwelomoya [ukuya kuma-78 ngo-2022] ngokuhambelana nokwanda kweemoto. "
Kwenzeka ntoni kwikhadi lika-Alitalia's MilleMiglia?
IKhomishini yaseYurophu ithathe isigqibo sokuba iAlitalia Ukunyaniseka, inkampani elawula inkqubo yokunyaniseka yenkampani yase-Italiya "iMilleMiglia," kufuneka ithengiswe kwelona bhidi liphezulu ngethenda yoluntu, elubala kwaye evulelekileyo kuwo onke amaqela anomdla. Kodwa i-ITA, inqwelo moya entsha yaseburhulumenteni, ngekhe ibenakho ukuthatha inxaxheba kule thenda njengophawu lokuyekiswa phakathi kweenkampani ezi-2. Amakhadi eMilleMiglia ajikelezayo aya kuthi ke aphele ngomnini omtsha ongekaziwa kwaye onokuthi asebenze kwenye indawo ngaphandle kwecandelo lokuhamba ngenqwelomoya.
Kwenzeka ntoni ukusuka nge-15 ka-Okthobha ka-2021?
Umthengi wenkqubo yokunyaniseka uya kuthatha isigqibo ngendlela yokusebenzisa ibhanti yeemayile eqokelelwe ngamalungu (malunga nezigidi ezi-5). Kuba ezi mile zilityala kwabo balawula le nkqubo, kuyakufuneka babone ukuba "izobhatalwa" njani. Ukuba umnini omtsha wokunyaniseka ebeya kuba, umzekelo, uphawu lwevenkile enkulu, inokuguqula ezo mayile zibe ziivawutsha zokuthenga, utshilo uLazzerini.
Ukubanjwa kweCardiac: Ukuphucula amaxabiso okusinda